Malunga nathi - i-Huai'an Aide Hydraulic Machinery Co., Ltd.
auto phakamisa iiyunithi amandla
dc iqela lempompo yeemoto
iiyunithi zamandla okubamba kabini
iiyunithi amandla ifolokhwe lift
phakamisa iiyunithi zamandla etafile
iiyunithi zamandla eloli yeelori
iiyunithi zamandla zokumisa isibambiso
iiyunithi zamandla e-rv
iiyunithi zamandla eetreyila zetreyini
Ukuphindaphinda ukubuyisela umva
IHuai'an Aide Hydraulics Co., Ltd.
IHuai'an Aide Hydraulics Co., Ltd.ibekwe eHuai'an kwaye yasekwa ngo-2011. Iimveliso zayo eziphambili zisetyenziswa kakhulu koomatshini bobunjineli, kugcinwa kunye nokuphathwa, izinto zokusebenza kunye neendawo ezinxulumene noomatshini. Lishishini lesitokhwe esidibeneyo esigxile kwimveliso yeempompo zegesi, iiyunithi zamandla e-hydraulic, iivelufa zamanzi, iifilitha, iisilinda kunye neenkqubo zamanzi. Iimveliso zayo zii-AC type A, C, DC zohlobo D, C. Ezona ndawo ziphambili zesicelo: iilifti zeemoto, iifolokhwe, izitaki zombane, amaqonga okunyusa iipipe, amagwegwe ezithuthi. Kule minyaka idlulileyo, ibonelele ngeenkonzo zokuxhasa izixhobo zomatshini, iimoto, izixhobo zokugcina iimoto, ii-loaders, izixhobo zokusebenza, oomatshini bezemigodi, amakhuba ekhephu, iziqhekezi zomthi, amaqonga okuphakamisa namanye amashishini. Ukongeza, inkampani ikwagxile kwimveliso kunye nokuthengiswa kweepleyiti ezahlukeneyo zeesileti zeoyile, eziyilelwe zaza zalungiswa kusetyenziswa izinto ezikumgangatho ophezulu ze-aluminium alloy ekrwada, ubugcisa bokucokisa i-alloy phambili kunye netekhnoloji yonyango lobushushu.
Umgangatho wemveliso ubalasele. Iimveliso eziphambili zenkampani zinoxinzelelo oluphezulu kunye neepompo zegiye ezincinci zokufuduka, iimpompo eziphindwe kabini, iiyunithi zamandla e-AC kunye neDC, ezikumgangatho ophambili wamazwe aphesheya. Azithengiswa kuphela kwilizwekazi lase China nase Taiwan, kodwa zithunyelwa e-United States, Canada, Ireland, Italy nakwezinye iimarike zamanye amazwe.
Umsebenzi ophambili wenkampani kukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokwenziwa kwenkqubo yesanti kunye nemveliso kubathengi abohlukeneyo. Ukubandakanya isikhululo sempompo ye-hydraulic, iivelufa zolawulo ezahlukeneyo kunye neevalvu zecartridge kunye nokunye ukuxhasa kunye nokudibana. Ukusebenza okuphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi.
Inkampani ihlala ihambelana nefilosofi yeshishini ye "Professionalism-Excellence", "Quality-Supreme", "Innovation-Refining and Transformation", kunye ne "Integrity-One Heart". Ukwenza ikamva eliqaqambileyo kunye nabathengi yeyona njongo yethu.
Inkampani iye yaqhubela phambili izixhobo zokuvelisa kunye neendlela zokuvavanya ngokupheleleyo, kwaye iseke inkqubo yolawulo lomgangatho ovakalayo.
Umgaqo wethu wequmrhu: umgangatho wokusinda, isantya sophuhliso, impumelelo yobungcali kwixa elizayo.
Inkampani ibambelela kwifilosofi elula yecandelo "loMgangatho wanamhlanje, iMarike yangomso", kwaye bonke abasebenzi baka-Aide baya kuqhubeka nokusebenzela abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu.
Wamkelekile abahlobo abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ukuba batyelele kwaye bahlole inkampani yethu, enkosi ngokuthembela kwakho kunye nenkxaso
Kwenzeka ntoni ukuba ioyile hydraulic ye ...
Yintoni iyunithi amandla ngamanzi
Oonobangela bentshukumo kunye nengxolo yehydrauli ...
I-118 i-Huaihe East Road, iSithili se-Huaiyin, isiXeko sase-Huaian, kwiPhondo le-Jiangsu
Sitsalele ngoku: 15905239130